कसरी ढल्यो बर्लिनको पर्खाल ? यसरी भयो कम्युनिष्ट समूहको विघटनको सुरुवात !
बर्लिनको पर्खाल ढाल्ने घटना बीसौँ शताब्दीको एक महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम थियो। त्यो कम्युनिष्ट समूहको विघटनको सुरुवातका रूपमा पनि स्थापित हुन पुग्यो। तर बर्लिनको पर्खाल ढल्नुभन्दा केही अघि के कस्ता घटनाक्रम विकास भएका थिए र त्यो ढालियो ? बर्लिनको पर्खाल ढलेको ३० बर्ष पूरा भएको छ । सन् १९८९ को नोभम्बर ३ मा ढालिएको थयो बर्लिनको पर्खाल । तर पर्खाल ढलेको ३० वर्ष पूरा हुादा पनि मनभित्रको अदृश्य पर्खाल भने अझै कायमै छ । एउटा अदृश्य पर्खालले अहिले पनि जर्मनीलाई विभाजित बनाइरहेको छ ।
तीस अगाडि बर्लिनको पर्खाल ढल्दा त्यसको कम्पनले सम्पूर्ण युरोपमा तरंग फैलिएको थियो भने पूर्वी जर्मनीमा आशाको लहर फैलिएको थियो । कम्युनिष्ट जर्मन डोमेक्रेटिक रिपब्लिकले पूर्वी जर्मनीका लागि यात्रा प्रतिबन्ध हटाएको घोषणा गरेको केही मिनेटमा नै बर्लिनको पर्खाल ढालिएको थियो । स्वतन्त्रता र एकताको भावनाले पूरै युरोप तरंगित भएको थियो । अहिले पनि पूर्वी र पश्चीम जर्मनीबीच सोंच र दृश्टीकोणमा निकै भिन्नता रहेको छ । अहिले पनि पूर्वी जर्मनीका नागरिकहरुले आफूलाई दोश्रो दर्जाको नागरिक सरह अनुभव गर्छन् । जर्मनीका ५ सय मध्ये जम्मा ३६ ठूला कम्पनीका मुख्यालयहरु पूर्वी जर्मनीमा छन् । सामाजिक अवस्थादेखि जनस्तरसम्म पूर्वी जर्मनीको अवस्था निकै कमजोर रहेको छ ।
चर्को करले जन्माएको फ्रान्सेली राज्यक्रान्ति र नेपाली सान्दर्भिकता !
तत्कालीन समयमा विश्व दुई धु्रवमा विभाजित थियो, एक संयुक्त राज्य अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेको पूँजीवादी विश्व र अर्को तत्कालीन सोभियत संघ नेतृत्वको कम्युनिस्ट विश्व। बर्लिनको पर्खाल ढल्नुलाई कम्युनिस्ट समूहको विघटनको सुरुवातको रूपमा समेत लिइएको थियो। कम्युनिस्ट शासन भएको पूर्वी जर्मनी र पूँजीवादी शासन भएको पश्चिम जर्मनीलाई लगभग तीन दशकसम्म छुट्याएको पर्खाललाई शीत युद्धको एउटा प्रतीकका रूपमा लिइन्थ्यो। तर सन् पर्खाल भत्काइएको एक वर्षपछि सन् १९९० मा दुई जर्मनीबीच एकता भयो र सिंगो जर्मनी बन्यो।
‘हामी हाम्रा मित्रसँगै ३० वर्षअघिको घटना सम्झन चाहन्छौं,’ जर्मनीका राष्ट्रपति स्टेनमियरले बर्नाअर स्ट्रासी बर्लिन पर्खाल स्मारकमा आयोजित औपचारिक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने क्रममा बताए। बर्लिन पर्खाल भत्किएको ३० वर्ष पुगेको अवसरमा आयोजित औपचारिका कार्यक्रममा जर्मनीका चान्सलर एन्जेला मर्केलसहित पोल्यान्ड, हंगेरी, स्लोभाकिया र चेक गणतन्त्रका राज्य प्रमुखसमेत सहभागी थिए। ३० औं वार्षिकोत्सव मनाउने क्रममा जर्मनीका राष्ट्रपति फ्रयांक–वाल्टर स्टेनमियरले शान्तिपूर्ण क्रान्तिका लागि पूर्वी युरोपलाई धन्यवादसमेत दिएका छन्। समारोहकै बीच राष्ट्रपति स्टेनमियर र पोल्यान्ठ, हंगेरी, स्लोभाकिया र चेक गणतन्त्रका राष्ट्रपतिहरुले तत्कालीन पूर्वी र पश्चिम जर्मनी छुट्याउने पर्खालको बाँकी अवशेषमा रहेको सानो खाली ठाउँमा फूल राखेका थिए।
राष्ट्रपति स्टेनमियरले अमेरिकी इतिहासविद् फ्रान्सिस फुकुयामाले भने झैं ऐतिहासिक घटनाले ‘इतिहासको अन्त्य’ नदेख्ने बताउँदै राजनीतिक व्यवस्थाबीचका संर्घष जारी नै रहेको र भविष्य झनै अनिश्चितातर्फ लम्किरहेको समारोहमा बताए। बर्लिन पर्खाल ढल्नुभन्दा तीन महिना पहिले सन् १९८९ मा हंगेरीको सीमा सुरक्षाकर्मीले पूर्वी जर्मनीका मानिसलाई अस्ट्रिया प्रवेश गर्न दिएका थिए। अस्ट्रिया हुँदै उनीहरु पश्चिममा देश पुगे। यही कारणले पूर्वी जर्मनीका तत्कालीन राष्ट्रपति राजीनामा दिन बाध्य भए। सोही वर्षको नोभेम्बर ९ का दिन पूर्वी जर्मनीले यात्रामा रहेको प्रतिबन्ध खुकुलो पार्ने निर्णय ग¥यो। यो निर्णय आएलगत्तै बर्लिनका मानिसले मौकाको सदुपयोग गर्दै पर्खाल भत्काउन सुरु गरे। हर्षित भीडले खुला सीमा पार गर्न थाल्यो।
अर्कातिर सयौं जर्मन नागरिक पूर्वी जर्मनीका आफ्ना छुट्टिएका आफन्तको पखाईमा थिए। खुला सीमा पार गर्नेबित्तिकै आफन्तहरु बीच मिलन भयो। त्यस रातका तस्बिर विश्वभरका सञ्चारमाध्यममा पुग्यो। त्यसको एक महिनापछि पूर्वी जर्मनीको अस्तित्व समाप्त भयो र जर्मनी मात्रै बाँकी रह्यो। पूर्वी र पश्चिम जर्मनीको एकीकरण भयो। अहिले पनि बर्लिन पर्खालका केही टुक्रा वा अवशेष बाँकी छन् जसले देश विभाजनको इतिहास सम्झाइरहेका छन्।